Maxaa ka jira in Ciidanka Gaashaan ay mar kale la wareegeen Ammaanka Madaxweynaha Soomaaliya? | kowtharmedia.com
Home WARAR Maxaa ka jira in Ciidanka Gaashaan ay mar kale la wareegeen Ammaanka Madaxweynaha Soomaaliya?
Maxaa ka jira in Ciidanka Gaashaan ay mar kale la wareegeen Ammaanka Madaxweynaha Soomaaliya?
Xog ay heshay Jowhar.com ayaa sheegaya in si KMG ah ammaanka Madaxweyne Farmaajo ula wareegeen Ciidamada Gaashaan, kuwaasoo horay u sugayay ammaankiisa markii uu ku guuleystay xilka Madaxweynaha
Ciidamada Milateriga ee Koofiya-gaduudka loo yaqaano ayaa hada sugida ammaankooda ku soo koobmay hareeraha Madaxtooyada iyo koolba-waardiyeyaasha ku hareereysan Madaxtooyada.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya inuu socdo qorshe lagu kala dirayo Ilaalada Madaxtooyadii horay u joogay, kuwaasoo la sheego inay u badan yihiin beel, sidoo kale´na loo baahan yahay kala shaandheyn maadaama Genaraal Gabre uu soo dhistay IIaaladii Hore.
Lama oga isku daygan inay la xiriirto cabsi xaga ammaanka ah, balse waxaa iyana la sheegayaa inuu jiro qorshe kale oo lagu bedelayo Ciidamada hada Madaxtooyada suga ammaankooda, isla markaana ciidamo cusub oo Milateri lagu bedeli doono.
Ciidamada Gaashaan ayaa looga baran inay si joogto u sugaan ammaanka Madaxweynaha, waxaana ciidamadan ay mararka qaar ka qeyb qaadan jireen sugida shirarka caalamiga iyo wafuuda imaaneysa, iyadoo mararka qaarna sugi jiray ammaanka Madaxweynayaashii hore, xilliyada ay safarada Gobolada aadayaan.
Ciidamadan ayaa ah ciidamo fuliya howl galada gaarka ah, iyo marka kooxo hubeysan ay weeraraan xarumaha dowladda iyo hotelada ku yaal Muqdisho, waxaana saldhigoodu yahay Garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Ammaanka Madaxtooyada ayaa waxaa suga Ciidamo Milateri ah, gaar ahaan Guutada Koofiyo-gaduud loo yaqaano, kuwaasoo ka hor bur burkii dowladdii dhexe sugi jiray ammaanka Madaxweynihii dowladdii Milateriga Allaha u naxariistee Maxamed Siyaad Barre.
Previous PostDaawo Malxiisadii Asmo Codey iyo Qoyskeeda oo Ka Jawaabay Eedaymihii loo soo jeediyey MUUQAAL!! Next PostDaawo Muuqaalkii ugu Murugo badnaa ee Xaalka Abaartu reebtay iyo Soomaalida oo aan isku gurman Karin hadda!!